Jabkii soo gaaray al-Shabaab asbuucii tagay
Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Dowlad Gobaleedka Jubbaland ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ururka nabad-diidka ah ee argagaxisada al-Shabaab ku lahaayeen meel howd ah oo u dhow deegaanka Kobon, iyagoona burburiyay saldhigyo ay kasoo abaabuli jireen weerarrada ay ku dhibaateeyaan Shacabka.
Ciidammadu waxay sidoo kale howlgallo ka sameeyeen isla aagga degmada Jamaame, dadkii ku sugnaa deegaanada ay ciidamadu gaareen ee Araare, Kobon iyo Muuse Xaaji ayaa si weyn usoo dhaweeyay, iyagoona siiyay raashin iyo dawo.
Dhaq dhaqaaqyada ay Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Jubbaland ka wadaan deegaannada hoostaga degmada Jamaame ayaa joog iyo jiifsi u diiday argagaxisada al-Shabaab.
Howlgal ka dhan ah maleeshiyada al-Shabaab ayaa ka soconaya qeybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, kuwaasi oo ay iska kaashanayaan ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa Jubbaland.
Howlgalkii ugu dambeeyey ayaa ciidamada waxaa ay ka fuliyeen deegaanada Buula Xaaji iyo Buundada Araare ee gobolkaasi Jubada Hoose, halkaasi oo ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab.